SAWIRO:- Xarunta Baarlamaanka DFS oo saaka ay ku tukadeen Xildhibaanada Baarlamaanka qaarkood iyadoo wadooyinku xiran yihiin. – Madal Furan
Hoy > Warka > SAWIRO:- Xarunta Baarlamaanka DFS oo saaka ay ku tukadeen Xildhibaanada Baarlamaanka qaarkood iyadoo wadooyinku xiran yihiin.
SAWIRO:- Xarunta Baarlamaanka DFS oo saaka ay ku tukadeen Xildhibaanada Baarlamaanka qaarkood iyadoo wadooyinku xiran yihiin.
Editor April 4, 2018 April 4, 2018 Warka 0
Muqdisho (Madal Furan) – Wararka saaka laga helayo magaaladda Muqdisho ayaa sheegaya in wadooyinka halbowlaha ah ee magaaladda ay xireen ciidamo ka tirsan Booliska iyo Nabad-sugida Soomaaliya.
Wadooyinka la xiray ayaa waxaa ka mid ah kuwa soo gala Madaxtooyadda iyo Baarlamaanka oo si weyn loo adkeeyey, jidka Wadnaha, kan Maka – Almukarama iyo guud ahaan wadooyinka looga cabsida qabo in dhibaato laga geysan karo.
Xaaladan ayaa waxaa barbar socday iyadoo 6dii Subaxnimo ee saaka ay xarunta Golaha Baarlamaanka DFS ay gudaha u galeen Xildhibaanada doonaya in la meel mariyo mooshinka ka dahnka ah Guddoomiye Jawaari.
Xildhibaanadan ayaa u ekaa kuwa halkaas ku tegay ballan iyo go’aamo ka soo baxay shir xalay ay yeesheen Raysal Wasaare Kheyre, Guddoomiye ku xigeenka 1aad Muudeey iyo Agaasimaha Madaxtooyada Fahad Yaasiin.
Waxaa aad loo adkeeyey amniga xarunta Baarlamanaaka iyadoo xataa laga fekeray haddii uu buuq yimaado ama gacan ka hadal aysan dhicin hub fudud oo ay Xildhibaanadu isu adeegsan karaan, sida miisaska, kuraasta, dhalooyinka sharaabka laga cabo, qalimaanta biiraha ah iwm.
Xildhibaanada taageersan Guddoomiye Jawaari ayaa rumeysan in Xukuumadda Kheyre ay si aan gabasho laheyn ula dagaalameyso Guddoomiye Jawaari isla markaasna loo diiday inay gaadiidkooda ku tagaan xarunta Baarlamaanka isla markaasna laga reebay gaadiidkii ay wateen inta aysan gaarin xarunta Baarlamaanka.
Deg deg:- Muuse Biixi oo u dhoofay dalka Itoobiya oo dhowaan looga yeeray
Eriteriya Isbedel noocee ah laga filan karaa 57 sano kadib